The Best Hoverboard Self adịzi skuuta 2017 - Jomo Technology Co., Ltd
The Best Hoverboard Self adịzi skuuta 2017
Ihe kpatara nke na-akpọ a onwe adịzi skuuta dị ka "Hoverboard" bụ na ebe-agba, ya anya ka ị na-hovering a ọnụ ọgụgụ nke sentimita asatọ n'elu ala. Cheta na-ịnọgide na-enwe na kọntaktị na ala. Nke a bụ ihe magburu onwe abụọ-wheel onwe guzozie electric skuutana bụ njikere inye a ụzọ ọzọ mụ na ahụmahụ n'ihi na nke nhọrọ. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị a scooters nwere ike ebubo kwesịrị ekwesị nke igbe, nke nwere ike inye a ohuru onye na-agba ihe dị ka ọkara otu awa itinye agba tupu ọ ga-ebubo kpamkpam. The osisi nwere a elu na-agba nke 12km kwa hour na ike mfe agazu ugwu na mkpọda na ndị ọzọ mbadamba ike aka. Ahapụ ya plugged na-eri n'otu ntabi anya na na-na na na omimi nche na okpomọkụ nke gị osisi mgbe ọ na-odori. Nnukwu mkpesa bụ ndị na-adịrị nsogbu na odori usoro
Nke a smart onwe adịzi skuuta , a onye okenye transporter abịa Bluetooth (dị ka gị ina), bụ ihe adaba na-enwe music ịnwa na ya. Ọ ọzọ nwere 500W Motors, ike ike na-eme njikere na ndị nkịtị ahu nagide. Ọzọkwa ị nwere ike hụ na gị na skuuta nke nhọrọ nwere nnukwu ike batrị. N'ihi na nke a onye, i kwesịrị tụlee nhọrọ n'etiti dị iche iche mmiri na-agụnye nchekwa, nke bụ unquestionable ebe a, ijeụkwụ, nke anyị ugbu a na-ama na-ekwu banyere, na kacha ibu na o nwere ike na-akwado n'etiti dị iche iche ihe. Ọ bụ ya kpọrọ ihe ọ bụ ezie na ọ bụrụ na portability abụghị nnukwu nke gị dị ka a n'ihi na ọ bụ jupụtara nhọrọ. Ọ nhọrọ a otu narị% pụrụ iche etu esi pụtara na-enye gị a mîkemeke ịnya nka. Ha nwere ike ịbụ oké ụtọ maka ọtụtụ afọ na-enye a pụrụ iche n'ụzọ na-gburugburu.
Ugbu a, ka-agbaji ya nwere, na-a uto nke a n'uche-ịfụ rosh. Ọzọkwa, ọ ga-agbaji nanị ọbụna na ụbọchị iji. Ọ e mere maka onye ọ bụla bụ na a mgbe niile iji dị ka onye ọzọ nke a playful toy nke ndị ọgaranya. Ịmụ ihe ịmụta otú njem a hoverboard kwesịrị mmezi fun mgbe ị na-amụta ụzọ ngwaọrụ ọrụ na otú mmiri emekọ ọ bụla ọzọ. Oge ọ bụla ị na nrughari a stof ọ bụla ọsọ na snow na-akwụsị na-a njem. Agba nwere mma ule taya akụkụ ugbu a na ọzọ. Ịchịkwa hoverboard na a nta wheel set dị mfe na ha nwere ọchịchọ zaghachi mee elu mee Otú ọ dị na ibu wiil ọ na-ewe oge na-ezitere okè gị na-achịkwa. Dị ka anyị na-na-banyere ndị ọkachamara na ọghọm nke ọ bụla hoverboard na ndekọ a, yiri anyị nwere ike na-eme na PowerBoard hoverboard. Ma, e nwekwara ndị ọzọ dị mkpa nkọwa iji lee anya na. Dị ka ọ bụ 2017, ndị mmadụ ga-a lee anya na ị na-enwe mmetụta nke ịtụnanya na a ngwakọta nke anyaụfụ. Ọ bụ ndị kasị dịrị nchebe nhọrọ n'ihi na anyị KOOWHEEL nwere kasị mma hoverboards onye kasị emepụta ma ọ bụ na-azụ ahịa na-elu kasị hoverboard akụkụ n'ichepụta ụlọ ọrụ na uru bụ ezi, ọnụ price.
Post oge: Sep-19-2017